ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ခဲ့သည့်ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေး – ရှအေလငျး
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ခဲ့သည့်ကျောက်ပန်းတောင်းသားလေး Like နဲ့ Share လုပ်ပြီး ချီးမြှောက်ကြရအောင်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးသင်္ချာ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့Math Kangaroo 2018 ပြိုင်ပွဲကြီး၏ဆုရရှိသူများ စာရင်းထွက်ပါပြီ။ ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစရာ သတင်းလေးတစ်ခုပြောပါမယ်။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ မြို့မကွက်သစ်မူလွန်ကျောင်းမှကျောင်းသားလေး မောင်ကောင်းမင်းထက် (ဦးဇော်မျိုးထက် + ဒေါ်ဇွန်ပွင့်) သီရိဂေဟာ ဓါတ်ပုံဗီနိုင်း ဆိုင်တို့၏ သားလေးသည် Math kangroo 2018 Award. Winner Grade.4စာရင်းတွင် GOLD. အဆင့်မှအောင်မြင်လျှက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၏ ဂုဏ်ကိုဆောင်ခဲ့ပါပြီ။
တစ်ခုခု ပြောခဲ့ပါဦး ကျောက်ပန်းတောင်းချစ်သူများဆုံရာ… ရဲရင့် ထွန်း
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးသခငြ်ျာ ပွိုငျပှဲတှငျ ဂုဏျထူးဆောငျခဲ့သညျ့ကြောကျပနျးတောငျးသားလေးLike နဲ့ Share လုပျပွီး ခြီးမွှောကျကွရအောငျ။
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးသခငြ်ျာ ပွိုငျပှဲတဈခုဖွဈတဲ့Math Kangaroo 2018 ပွိုငျပှဲကွီး၏ဆုရရှိသူမြား စာရငျးထှကျပါပွီ။ ဝမျးမွောကျဂုဏျယူစရာ သတငျးလေးတဈခုပွောပါမယျ။ ကြောကျပနျးတောငျးမွို့ မွို့မကှကျသဈမူလှနျကြောငျးမှကြောငျးသားလေး မောငျကောငျးမငျးထကျ (ဦးဇျောမြိုးထကျ + ဒျေါဇှနျပှငျ့) သီရိဂဟော ဓါတျပုံဗီနိုငျး ဆိုငျတို့၏ သားလေးသညျ Math kangroo 2018 Award. Winner Grade.4စာရငျးတှငျ GOLD. အဆငျ့မှအောငျမွငျလြှကျ ကြောကျပနျးတောငျးမွို့၏ ဂုဏျကိုဆောငျခဲ့ပါပွီ။
တဈခုခု ပွောခဲ့ပါဦး ကြောကျပနျးတောငျးခဈြသူမြားဆုံရာ… ရဲရငျ့ ထှနျး
မီးမီးခဲက အရင် အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာပါ ဆိုပြီး အားလုံးကို ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း
ပိုင်ရှင်မဲ့ တရားမဝင်သစ်ကား(၁ဝ)စီး ဖမ်းဆီးရမိ
Memory Card ထဲက ပျောက်သွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ရှာဖွေနိုင်မဲ့နည်းလမ်း
ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို သယ်ထုတ်နေတာကိုကြည့်ပြီး...